Somaliland: Diyaarado Duqeeyay Deegaanno Ka Mid Ah G. Selel Ee Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Diyaarado Duqeeyay Deegaanno Ka Mid Ah G. Selel Ee Somaliland
Diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay oo kuwa dagaalka ah ayaa rasaas ku riday deegaanno ka tirsan Somaliland, sida uu sheegay Guddoomiyaha gobolka Selel Axmed Maxamed Xaashi.
Diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dad ku dhaqan miyiga deegaannada ku dhaw magaalo-xeebbeedda Saylac, waxayna duqeyntaasi sababtay dhimashada xoolo nool iyo argagax-gelinta dadka deegaanka, wallow aanay jirin Dad dhibaato ka soo gaadhay.
Sidoo kale, Doraad Habeennimadii ayaa diyaarado kale oo kuwa Qumaatiga u kaca ahi ay rasaas ku fureen Dad deggan Saylac iyo Lowyacaddo, sida uu Idaacadda VOA u sheegay Guddoomiyaha Gobolka Selel, laakiin wax khasaare ahi kama dhalan rasaastaasi, marka laga yimaaddo Argagaxa ay ku rideen Dadka.
Guddoomiyaha gobolka Selel Axmed Maxamed Xaashi oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay “Dadka ay Xoolahooda waxyeelaysay waxa ka muuqatay Argaggax badan, waxay yidhaahdeen habeennimo ayay ahayd markii ay sidaa noogu soo foorarsatay ayaanu laydhkii bakhtiisannay, dabadeedna Rasaasta ayay nagu furtay.” Ayuu yidhi, Guddoomiyaha Selel oo ka warramaya Xaaladda Dadkii Diyaaraduhu duqeeyeen.
Guddoomiyaha oo la waydiiyey Cidda ay u maleynayaan inay Diyaaradahan leeyihiin, ayaa ku jawaabay “Wallaahi, diyaaradahaasi waa Diyaarado aan haybtooda la garanayn, waana nooca Qumaatiga u kaca, Cid diyaaradahaa loo raacana ma garanayno, laakiin sidii loo raadin lahaa ayaanu ka war-bixinnay.”